Nlebanya - Sorrento Therapeutics
Anyị na-etinye sayensị dị egwu iji mepụta usoro ọgwụgwọ ọhụrụ nke ga-eme ka ndụ ndị na-arịa ọrịa kansa dịkwuo mma, mgbu na-adịghị agwụ agwụ na COVID-19.
cancer dị iche iche n'ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa, na-eme mgbanwe nke ukwuu, na-agbanwe agbanwe mgbe niile yana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke a na-adịghị ahụ anya na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Ụzọ anyị si agwọ ọrịa cancer na-adabere na nkwenye na ndị ọrịa ga-achọ usoro multimodal, multipronged - na-elekwasị anya n'otu ma ọ bụ dị iche iche nke ebumnuche cellular na ịwakpo ndị dị n'akụkụ dị iche iche - n'otu oge ma ọ bụ n'usoro, ugboro ugboro na n'akwụsịghị akwụsị.
Ụzọ anyị si alụso ọrịa ọgụ ọgụ bụ nke pụrụ iche immuno-oncology ("IO") Pọtụfoliyo, nke nwere ọtụtụ ihe ọhụrụ na ihe mmekọrịta, dị ka nnukwu ọba akwụkwọ mgbochi mmadụ zuru oke ("G-MAB™") nke nwere ike. a ga-eji ya n'onwe ya ma ọ bụ tinye ya n'ime ụzọ ebuso ọrịa kansa gụnyere:
Ngwa ngwa ezubere iche nke lymphatic (Sofusa®) emebere iji nyefee ọgwụ mgbochi n'ime sistemu lymphatic, ebe a na-azụ mkpụrụ ndụ na-alụso ọrịa ọgụ ọgụ maka ọrịa kansa.
Anyị ewepụtala ọgwụ mgbochi mmadụ megide ọtụtụ ebumnuche dị mkpa na ọgwụgwọ ọrịa kansa, gụnyere PD-1, PD-L1, CD38, CD123, CD47, c-MET, VEGFR2, na ọtụtụ ebumnuche ndị ọzọ, bụ ndị nọ na ọkwa dị iche iche nke mmepe. Mmemme CAR-T anyị gụnyere usoro ọgwụgwọ CD38 CAR T. Usoro ọgwụgwọ na-ejikọta ụzọ dị na nyocha ọkwa nke mbụ maka otutu myeloma, ọrịa cancer akpa ume, na ọrịa cancer ndị okenye na ụmụaka ndị ọzọ.
CAR T (Chimeric Antigen Receptor – T Cells) ọgwụgwọ nke na-agbanwe mkpụrụ ndụ T nke onye ọrịa iji gbuo etuto ha.
DAR T (Dimeric Antigen Receptor – T Cells) ọgwụgwọ nke na-agbanwe mkpụrụ ndụ T nke onye na-enye onyinye ahụike ka ọ na-emeghachi omume na etuto onye ọrịa ọ bụla, na-enye ohere maka ọgwụgwọ “pụọ shelf” nke etuto onye ọrịa.
Njikọ ọgwụ mgbochi-ọgwụ (“ADCs”), na
Mmemme nje Oncolytic (Seprehvir™, Seprehvec™)
“ Pọtụfoliyo pụrụ iche nke akụrụngwa ikpo okwu IO enweghị atụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ gụnyere ndị na-egbochi ihe mgbochi mgbochi, ọgwụ mgbochi bispecific, mgbochi-ọgwụ conjugates (ADCs) yana chimeric antigen receptor (CAR) na dimeric antigen receptor (DAR) usoro ọgwụgwọ cellular dabere na nso nso a, anyị agbakwunyela nje oncolytic (Seprehvir ™, Seprehvec). ™). Ihe onwunwe ọ bụla n'otu n'otu na-egosipụta nnukwu nkwa; jikọtara ọnụ anyị na-eche na ha nwere ike imeri ihe ịma aka ọrịa kansa siri ike.
Nkwenye anyị iji meziwanye ndụ ndị ọrịa na ihe a na-eche ugbu a dị ka ihe mgbu na-adịghị agwụ agwụ na-egosipụtakwa site na mgbalị anyị na-adịghị agwụ agwụ iji mepụta obere molecule nke mbụ na klas (TRPV1 agonist) na-abụghị opioid obere molecule, Resiniferatoxin ("RTX").
Resiniferatoxin nwere ike ịgbanwe n'ụzọ dị ukwuu na usoro nlekọta mgbu na ihe ngosi dị iche iche, n'ihi mmetụta dị ike na ogologo oge na otu nchịkwa kamakwa n'ihi uru nke profaịlụ na-abụghị opioid.
RTX na-emecha ule ndị dị mkpa tupu oge na ihe ngosi mmadụ dị ka ọrịa ogbu na nkwonkwo na njedebe nke ọrịa cancer ndụ, yana ọmụmụ ndebanye aha dị mkpa ga-amalite ọkara nke abụọ 2020.
RTX nọkwa n'ule dị mkpa maka itinye n'ime nkịta ibe ya na-esiri ike ijikwa mgbu ikpere ogbu na nkwonkwo. Dị ka anụ ụlọ bụ akụkụ nke ezinụlọ, ụzọ anyị si emepụta ihe ngwọta nchịkwa mgbu na-ewu ewu bụ ịgụnye ụdị ndị ọzọ anyị hụrụ n'anya!